Izindaba - Ukuphathwa KweBaker-Polito Kumemezela Ukuxhaswa Ngezimali Kwezobuchwepheshe Obusha Ezitshalweni Zokwelashwa Kwamanzi Angcolile
Isimiso Se-FMBR Technology
I-FMBR Patent Nemiklomelo
I-WWTP Esezindaweni Zasemakhaya
Ikhwalithi ephezulu ye-WWTP (Ukuchithwa Kwamanzi Omfula Naphezulu)
I-WWTP Ebuyile Ebusayo
Ukuphathwa kweBaker-Polito Kumemezela Ukuxhaswa Ngezimali Kwezobuchwepheshe Obusha Ezitshalweni Zokwelashwa Kwamanzi Angcolile
I-Baker-Polito Administration namuhla ikhiphe imali engama- $ 759,556 yezibonelelo ukuxhasa intuthuko eyisithupha yezobuchwepheshe yezindawo zokwelashwa kwamanzi angcolile ePlymouth, Hull, Haverhill, Amherst nasePalmer. Uxhaso, olunikezwe ngohlelo lwe-Massachusetts Clean Energy Center's (MassCEC) Wastewater Treatment Pilot, lusekela izifunda zokuphathwa kwamanzi angcolile zomphakathi kanye neziphathimandla eMassachusetts ezibonisa ubuchwepheshe obusha bokunakekelwa kwamanzi angcolile obukhombisa amandla okunciphisa isidingo samandla, ukuthola izinsiza ezifana nokushisa, i-biomass, amandla noma amanzi, kanye / noma izakhamzimba ezilungisiwe ezifana ne-nitrogen noma i-phosphorus.
"Ukuhlanzwa kwamanzi angcolile kuyindlela enamandla kakhulu, futhi sizibophezele ekusebenzisaneni nomasipala kulo lonke elaseCommonwealth ukusekela ubuchwepheshe obusha obuholela ezindaweni ezihlanzekile nezisebenza kahle," kusho uMbusi uCharlie Baker. "IMassachusetts ingumholi kazwelonke emisha futhi sibheke phambili ekuxhaseni le misebenzi yamanzi ukusiza imiphakathi ukuthi inciphise ukusetshenziswa kwamandla nokunciphisa izindleko."
"Ukuxhasa le miklamo kuzosiza ekuthuthukiseni ubuchwepheshe obusha obuzothuthukisa kakhulu inqubo yokuhlanzwa kwamanzi angcolile, engenye yabathengi abakhulu bakagesi emiphakathini yethu," kusho uLieutenant Governor Karyn Polito. "Abaphathi bethu bakujabulele ukuhlinzeka ngoxhaso lwamasipala komasipala ukuze babasize bakwazi ukubhekana nezinselelo zokuphathwa kwamanzi angcolile nokusiza iCommonwealth yokonga ugesi."
Ukuxhaswa kwalezi zinhlelo kuqhamuka kwi-MassCEC's Renewable Energy Trust eyadalwa isiShayamthetho saseMassachusetts ngo-1997 njengengxenye yokususwa komthetho emakethe yezinsiza zikagesi. Isikhwama sixhaswe ngemali ekhokhwayo yezinhlelo ezikhokhwa ngamakhasimende kagesi aseMassachusetts ezinsiza eziphethwe ngabatshalizimali, kanye neminyango kagesi kamasipala ekhethe ukubamba iqhaza kulolu hlelo.
"UMassachusetts uzibophezele ekuhlangabezaneni nezinhloso zethu zokunciphisa igesi yokushisa ukushisa, futhi ukusebenza namadolobha namadolobha akulo lonke izwe ukwenza ngcono inqubo yokuhlanzwa kwamanzi angcolile kuzosisiza ukuthi sifinyelele kulezo zinhloso," Kusho uNobhala Wezamandla Nezemvelo uMatthew Beaton. "Amaphrojekthi asekelwa yilolu hlelo azosiza inqubo yokuhlanzwa kwamanzi angcolile ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla nokuletha izinzuzo zemvelo emiphakathini yethu."
"Siyajabula ukunika le miphakathi izinsiza zokuhlola ubuchwepheshe obusha obwehlisa izindleko zabathengi kanye nokwenza ngcono ukusebenza kahle kwamandla," kusho isikhulu seMassCEC uStephen Pike. "Ukuhlanzwa kwamanzi angcolile kuyinselelo eqhubekayo komasipala kanti le misebenzi inikeza izixazululo ezingaba khona ngenkathi isiza iCommonwealth yakhela esikhundleni sayo njengomholi kazwelonke ekusebenziseni amandla kagesi kanye nobuchwepheshe bamanzi."
Ochwepheshe bemikhakha abavela eMnyangweni Wezokuvikelwa Kwezemvelo eMassachusetts babambe iqhaza ekuhloleni iziphakamiso futhi banikela ngemibono mayelana nezinga lemisebenzi emisha ehlongozwayo kanye nokusebenza kahle kwamandla okungenzeka kutholakale.
Iphrojekthi ngayinye enikezwayo ubambiswano phakathi kukamasipala nomhlinzeki wezobuchwepheshe. Uhlelo luye lwathola imali eyengeziwe engama- $ 575,406 evela kumaphrojekthi ayisithupha okuhlola.
Labo masipala abalandelayo kanye nabahlinzeki bezobuchwepheshe banikezwe imali:
Isikhumulo sezindiza sikamasipala sasePlymouth kanye nokuvikelwa kwemvelo kweJDL ($ 150,000) - Uxhaso luzosetshenziselwa ukufaka, ukuqapha, kanye nokuhlola isikhungo sokucoca amanzi amdaka esinamandla aphansi esikhungweni esincane sokuhlanza amanzi angcolile.
Idolobha laseHull, AQUASIGHT, kanye noWoodard noCurran ($ 140,627) - Uxhaso luzosetshenziselwa ukwenza futhi kugcinwe ipulatifomu yezobunhloli, eyaziwa njenge-APOLLO, eyazisa abasebenzi bamanzi angcolile nganoma yiziphi izinkinga nezenzo ezizokwandisa ukusebenza kahle komsebenzi.
Idolobha laseHaverhill ne-AQUASIGHT ($ 150,000) - Uxhaso luzosetshenziselwa ukuqalisa nokugcina ipulatifomu yezobunhloli yokufakelwa i-APOLLO endaweni yokuhlanza amanzi angcolile eHaverhill.
Idolobha lasePlymouth, iKleinfelder neXylem ($ 135,750) - Imali izosetshenziselwa ukuthenga nokufaka izinzwa zomsoco we-optic ezenziwe nguXylem, ezosebenza njengezindlela eziyinhloko zokulawula inqubo yokususa izakhi.
Idolobha lase-Amherst ne I-Blue Thermal Corporation ($ 103,179) - Imali izosetshenziselwa ukufaka, ukuqapha, kanye nokukhipha ipompo yokushisa yamanzi angcolile, ezohlinzeka ngokushisa, ukupholisa, kanye namanzi ashisayo ku-Amherst Wastewater Treatment Plant kusuka kumthombo ovuselelekayo.
Idolobha lasePalmer neNkampani Yamanzi ($ 80,000) - Imali izosetshenziselwa ukufaka uhlelo lokulawulwa kwe-aeration olususelwa ku-nitrogen kanye nemishini yokusampula.
"UMfula uMerrimack ungomunye wemcebo omkhulu wemvelo weCommonwealth futhi isifunda sethu kumele senze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuvikelwa kweMerrimack eminyakeni ezayo," kusho uSenator Wombuso u-Diana DiZoglio (D-Methuen). “Lesi sibonelelo sizosiza kakhulu iDolobha laseHaverhill ekwamukeleni ubuchwepheshe bokukhulisa ukusebenza kahle kohlelo lwalo lokuhlanza amanzi angcolile. Ukuvuselela izitshalo zethu zokuhlanza amanzi angcolile kuyisinyathelo esibalulekile ekuqinisekiseni ezempilo nokuphepha hhayi kuphela kubahlali abasebenzisa umfula ukuzithokozisa nezemidlalo, kodwa nakwezilwane zasendle ezibiza iMerrimack kanye nekhaya layo lezinto eziphilayo. ”
"Le mali evela kwaMassCEC izovumela abakwaHull ukuthi baqinisekise ukuthi indawo yabo yokuhlanza amanzi angcolile isebenza ngaphandle kwezinkinga zokusebenza," kusho uSenator Wombuso uPatrick O'Connor (R-Weymouth). "Njengomphakathi osogwini, kubalulekile ukuthi izinhlelo zethu zisebenze kahle futhi ngokuphepha."
“Siyajabula ukuthi iMassCEC ikhethe iHaverhill ukuthola lesi sibonelelo,” kusho Omele Umbuso u-Andy X. Vargas (D-Haverhill).“Sinenhlanhla yokuba neqembu elikhulu esikhungweni samanzi angcolile saseHaverhill esisebenzise ngobuhlakani izindlela ezintsha ukwenza ngcono umsebenzi womphakathi. Ngiyayibonga iMassCEC futhi ngilangazelele ukuqhubeka nokuxhasa izinhlelo zombuso ezisungula futhi zithuthukise izinga lempilo labahlali bethu. ”
"ICommonwealth yaseMassachusetts iyaqhubeka nokubeka phambili imali kanye nobuchwepheshe ukwenza ngcono ikhwalithi yamanzi kuyo yonke imifula yethu nemithombo yamanzi okuphuza," kusho uMmeli Wombuso uLinda Dean Campbell (D-Methuen). "Ngihalalisela iDolobha laseHaverhill ngokusebenzisa le teknoloji yakamuva futhi engabizi kakhulu ekwenzeni ngcono ukuhlanzwa kwamanzi angcolile nokwenza le njongo ibe seqhulwini."
"Sithokozela utshalomali lweCommonwealth emphakathini wethu ukunweba ukusetshenziswa kwedolobha kwezobuchwepheshe ukuze kusebenze kahle, futhi ekugcineni kulondolozwe impilo yezemvelo," kusho Omele Umbuso uJoan Meschino (D-Hingham).
"Ubuhlakani bokufakelwa ubuchwepheshe obuthembisayo kakhulu obungathuthukisa kakhulu ukusebenza nokusebenza," kusho uMmeli woMbuso uLenny Mirra (R-West Newbury). "Noma yini esingayenza ukunciphisa ukufunwa kwamandla, kanye nokuphuma kwe-nitrogen ne-phosphorus, kungaba ngcono kakhulu endaweni yethu."
Isikhathi Iposi: Mar-04-2021
Buza Isixazululo Samanzi Angcolile
Ikheli244 Fifth Avenue, Suite Q222 New York, NY 10001